म कसरी ब्याकलिङ्कहरूको लागि याहू प्रयोग गर्छु?
प्राय: सामान्यतया, व्यक्तिले ब्याकलिङ्कहरूको लागि याहू जस्तै वैकल्पिक खोजी इन्जिन प्रयोग गर्दैछ, जब Google लाई जस्तै प्रमुख वेबसाइटहरूमा तपाईको वेबसाइट वा ब्लग पेश गर्ने कुनै अन्य तरिका छैन. त्यसैले, तल म तपाईंलाई देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ कि कसरी Yahoo को ब्याकलिङ्कका लागि प्रयोग गर्ने. यो बस राख्नुहोस्, हामी याहू जवाफ प्राप्त गर्न जाँदैछौं कि तपाईले यी बहुमूल्य ब्याकलिङ्कहरू फर्किन सक्नुहुनेछ. तथ्याङ्क, तथापि, यो कुरा भनेको ती उत्तरहरू प्राकृतिक रूपमा सम्भव बनाउँनु हो, निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू स्प्यामको रूपमा चिनिने छैनन्।. र Yahoo लाई ब्याकलिङ्कको लागि प्रयोग गर्ने केहि अन्य तरिकाहरू छन् - तल म तपाईँलाई एक पूर्ण सूची कार्य पूरा गर्न सबै सम्भावित विकल्पहरू लुकाउन देखिरहेको छु।. यहाँको मुख्य बुलेट प्वाइन्टहरू तपाईंको मनमा राख्नुहोस्, पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नुहोस्:
अरू कुनै पनि भन्दा अघि तपाईंले Bing को वेबमास्टर उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वेबसाइट वा ब्लग प्रस्तुत गर्न याहू. ध्यान राख्नुहोस् कि याहू अब बिंग द्वारा स्वामित्व गरिएको छ. त्यसकारण, तपाईले तपाइँको सबमिशन प्रक्रिया पूरा गर्न सिधै पुन: निर्देशित बिंगको वेबमास्टर उपकरण बक्समा पठाउनुहुनेछ.
सबै पछि, तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा ब्लग URL लाई सिधै बिंग सर्च इन्जिनमा भर्खर प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. यसो गर्दा, बिंगको वेबमास्टर उपकरणको सही प्रयोग गर्न को लागी तपाईंको समय खर्च गर्न को लागी कुनै खर्च गर्न आवश्यक पर्दैन.
तपाईं आफ्नो लिङ्क इमारत प्रयास को भाग को संभालने को लागी केहि उद्योग सम्बन्धी या आला चर्चाहरु को लागी आवेदन गर्न सक्छन्।. यदि तपाइँ ब्याकलिङ्कका लागि याहू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईलाई आवश्यक छ याहू जवाफ सेवामा केहि उत्कृष्ट पदहरू पोस्ट गर्नु हो. यस तरिका, तपाईं केवल फिर्ती मा बहुमूल्य लिंक प्राप्त नहीं गर्नेछन् तर पनि अतिरिक्त ट्राफिक लाभ प्राप्त गर्नेछन्.
र तपाईले यो पनि याहू उत्तर (ए। मा सबै भन्दा अक्सर सोधिने प्रश्नहरूको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ. k. a. अकसर गरेए प्रश्न) पागल र बोल्ट बुझ्न को लागी - र तपाईंको लक्षित दर्शकहरु या बजार आला को वर्तमान ब्याज को उन लोकप्रिय मामलाहरु संग केहि अतिरिक्त पदहरु लाई पहुंचाने को लागि.
यसबाहेक, तपाईं यस कुरालाई अझ गहिरो पार गर्न सक्नुहुन्छ. प्रत्येक मापनको बारे मा सोच्ने प्रयास गर्नुहोस् - मेरो मतलब तपाईले यसलाई ढिलो तुल्याउन सक्छ, सम्भवतया सबै भन्दा राम्रो तरिकाको जवाफ दिनुहुन्छ, अनि आवश्यक छ तपाईंको प्रत्येक प्रतिक्रियाको लागि लिङ्क पोस्ट गरी. निस्सन्देह, यो धेरै समय लागु हुनेछ, र वास्तवमा धेरै मात्रामा मापन योग्य परिणामहरू बिना एक पटक देख्न सकिन्छ. यद्यपि, तपाईं आफ्नो मुख्य व्यवसाय वेबसाइट वा ब्लगको लागि बलियो र विश्वसनीय ब्रान्ड नामको आकारमा राम्रो काम गर्न सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ. यस तरिका, तपाईं एक मजबूत ब्याकलिङ्क प्रोफाइल निर्माण को मुख्य लक्ष्य तिर बिस्तारै सार्नु पर्छ - र तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ!
याहू मा ब्याकलिङ्कका लागि मात्र पर्याप्त उत्तरको लागि काम गर्दै - यहाँ तपाई के सम्झनु हुन्छ. हो, यो धेरै समय लाग्न सक्छ, त्यसैले तपाईं राम्रो जवाफ प्रत्येक जवाफको साथमा पूर्ण हुनुहुनेछ. त्यसोभए, धेरै छोटो वा सजिलो जवाफहरू पोस्ट गर्नबाट बच्न - जब सम्म तपाइँ तिनीहरूलाई स्प्याम जस्तो हेर्न चाहनुहुन्न. अन्तिममा, यहाँ के तपाईंले सम्झनु भएको छ - अधिक व्यक्तिले याहू जवाफमा तपाईको वेबसाइट वा ब्लग बारे सिक्दछ (यदि तपाईंको पोष्ट पछि कुनै लिंक उपलब्ध छैन) - अझ राम्रो चीज आउनेछ Source . यहाँ कुञ्जी तपाईंको समय तिर्न हो, र तपाईंले गर्नुभयो!